Kukho intlanzi yentsapho ye-salmon, ebizwa ngokuba yintlanzi emhlophe. Yile yeqela le-whitefish. Le mbono isele ifikelele ekupheleni. Le ntlobo inamacandelo angama-subspecies. Le ilma kunye neentlanzi ezimhlophe. Le ntlanzi iyisango. Itholakala kwiLwandle lweCaspian, i-nelma inokufumaneka kwimilambo yeNyakatho: Ob, Northern Dvina, Pechora nabanye. Kukho ukucinga ukuba le ntlanzi yafika kwiCaspian esuka e-Arctic Ocean ngexesha leqhwa.
I-fishfish ebomvu i-Redfish iyinhlanzi enkulu, ubude bayo bufikelela kumakhilomitha ezilikhulu namashumi mabini, kunye nobukhulu - iikhilogram ezingama-20. Le ntlanzi ihlala ngokusisigxina kwiLwandle laseCaspian, kwaye ukuze ihambe inzala, iya kwiVolga okanye kwiiUals, kwaye ihlala khona ixesha elide. I-Belorytsu ithathwa njengentlanzi ebalulekileyo kakhulu yorhwebo, ininzi ingqalelo ekuhlawulweni kwayo. Kukholelwa ukuba i-salmon yamhlophe ingasetyenziswa kuphela kumntla we-Caspian Sea.
Kumzimba we-belorybitsy unemibala engumlenze, umqolo wayo ungumbala obomvu obomvu, kwaye isisu sisimhlophe. Ibhinqa inkulu kunokuba yindoda. Intlanzi ibhekisela kwiintlanzi ezidliwayo, kwimenyu enayo, ngokuyisiseko, intlanzi encinci: i-herring, vobla, neenkomo zenkomo. I-Belorybitsa ivelisa ngokukhawuleza kunokuba i-Nelma, ikhula ngokuvakalayo ngomnyaka wesi-7 wobomi bayo.
UBelorybitsa: ixabiso layo lezondlo.
Njengoko kuchaziwe ngasentla, i-whitefish ithathwa njengentlanzi ebalulekileyo yezorhwebo, kodwa ichithwa elincinci, kuba ayisoloko ivelise ukuloba okuphezulu. Ngokwexabiso londlo, intlanzi yesibini emva kwentlanzi yeentlobo ze-sturgeon.
Inyama ye-Whitefish imhlophe, kuyinto ekulungele ukuyinquma ngamacwecwe, inokwakheka kwintlandlolo, into ebonakalayo. Nanamhlanje, ungathenga iintlanzi ezimhlophe okanye ezinamanzi ezinamanzi kwiimaketanga zokuthengisa. Olutsha kwiityuli ezingabonwa ngokungafanekiyo, kuba inyama inamanqatha (umxholo weoli ufikelela kuma-26%), ngoko kutshabalalisa ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, inyama yale ntlanzi inomdla kakhulu kwaye inomnandi. Ukusuka kwenyama yentlanzi engavamile ufumana i-balyk enobungqingili kunye ne-smyk.
E-belorybitsy xabiso eliphezulu lekharoriki. I-100 gram akhawunti malunga neekhalori ezingama-88.
Belorybitsa: ukwakheka, izakhiwo ezixhamlayo.
Le ntlanzi ebomvu iqukethe ezininzi ii-vitamin PP, izinto ezininzi ezilandelelanayo, njenge-nickel, i-molybdenum, i-chromium, iodine, i-zinc kunye ne-fluoride. Kukho kukho ukwenziwa kwe-chlorine.
Iintlawulo zeemveliso zentlanzi ayifanelekanga ukuthetha ngazo, kuba akunakwenzeka. Siyabulela kumxholo wezinto ezininzi ezibalulekileyo, intlanzi ngumkhiqizo wesondlo, zonke izinto ezithathwa kalula ngumzimba. Inyama yentlanzi inomxholo oyingqayizivele, onamafutha anezakhiwo eziwusizo. Ezi zakhiwo zeentlanzi zisetyenziswe ngabazondlo ngokutya okunempilo. Kwimenyu, i-dietitians ikwacetyiswa ukuba ifake ioli yeentlanzi kwaye, ngokwenene, inyama yeentlanzi ngokwayo.
Izizwe zehlabathi zixabisa kakhulu iimpawu zondlo kunye neengcamango zesitya seentlanzi. Abantu sele bekwazi ukuba intlanzi incedo kakhulu, ngoko basebenzisa inyama yeentlanzi ngokwayo, kunye nemveliso enokufumaneka kwiintlanzi, umzekelo, ioli yeentlanzi. Imveliso yenyama yokupheka yintlanzi isoloko isiseko sesondlo sokutya kunye nesondlo sokutya. Ziyanconywa ukuba zihambelane nezilonda zesiginci sesisu, isifo se-thyroid kunye nenkqubo yokuxhasa yomzimba womntu.
Iintlobo zeentlanzi ezimhlophe zibangelwa kukuba, njengokuba kuzo zonke iintlanzi ezinamanci, amaninzi e-fatty acids ayaziwa ngokuba luncedo kakhulu. Ezi acids zinceda ukunciphisa i-cholesterol "eyingozi" egazini kwaye igcine ibe yinto evamile. Ukuba uyidla inyama ye-belorybytsya rhoqo, unokunciphisa kakhulu ukuphuhliswa kokuqala kwe-infarction.
E-belorybitsa iqukethe izinto ze-iodine. Kwaye, njengoko kuyaziwayo, luncedo kakhulu ekusebenzeni ngokuqhelekileyo kwe-thyroid gland. Kwinyama yeentlanzi ezimhlophe kukho i-fluorine, ebangela ukuba amathambo aphuhlise ngokuqhelekileyo, kwaye yonke imishini isebenze ngaphandle kokusilela. Kungekude kudlulileyo, abantwana babefuneka ukuba banike ioli yeentlanzi ezincinci ukukhusela ukuphuhliswa kwezilonda ezinobuncwane.
Ngokuphathelele ubuhle kunye nokuvisisana kwamabhinqa, ngoko ke, kufuneka kuqatshelwe, i-whitefish ingaphantsi kwee-caloric kunezinye izinto eziqhelekileyo, kodwa izinto ezincedo kule ntlanzi azincinci, ngamanye amaxesha zininzi. Iintlanzi ezinobungozi kuba kutheni abaculi bezilwanyana bayacetyiswa ukuba basebenzise abo bayesaba ukubuyela, kodwa bahlawule ingqalelo enkulu kwimpilo yabo kunye nesondlo esifanelekileyo.
UBelorybitsa: isicelo sayo.
UBelorybitsa, ngokubhekiselele kwiqela le-salmon, unalo lonke uhlobo oluthile lwezityalo ezizizityebi. Unomzimba ocolileyo kakhulu, onokuthi unako ukufumana uluhlu olupheleleyo lwe-micronutrients nezinye izinto ezibalulekileyo.
Kwilungiselelo le-balyk belarybitsa akukho nto ithatha indawo. Ukusuka kwenyama yayo kuvela ngokugqibeleleyo. I-salmon emhlophe emnandi kwimoya yetyuwa. Ukuba ungeze inyama ebomvu yeentlanzi ezimhlophe kwi-solyanka, iya kufumana ingcamango ekhethekileyo yentsusa. Ungacingi ukuba kule ntlanzi unokupheka kuphela izidlo ezidliwayo, izitya eziqhelekileyo ngaphandle kwazo zonke izidlo ezidliwayo nazo ziqhelekileyo ngendlela enqabileyo. I-fishfish i-fishfish ilungile kwaye ibilisiwe, kwaye iyabhema, kwaye idikiwe, kwaye idibene. Kwaye indlebe evela entlanzi emhlophe imangalisa nje!
Yintoni abaqalayo kufuneka bazi?
Ukutya okufunekayo kwilusu elipheleleyo
Ngexa uSobchak elala ebusuku eMoscow, uVitorgan wangena phantsi kweso sikhephe
Ubumnandi bebusika kubhekisela kwi-hairstyle
Iingubo zesibhinqa sombala we-tiger
Iingcamango zokuhlobisa indlu unyaka omtsha
I-Saladi kunye ne-brynza rye imvumba yamatamatisi kunye ne-ba
Isaladi kunye nenkukhu epopayi kunye neepasta ezihlaza